Jwxo-shiil oo Markii Ugu Horaysay Kulan Yar ku Qabtay London – Rasaasa News
Sep 9, 2011 Jwxo-shiil oo Markii Ugu Horaysay Kulan Yar ku Qabtay London
London, Sep 9, 2011 [ras] – 15 Ruux oo toban ka mid ah ay yihiin beesha Jwxo-shiil, oo waliba qaarkood ay yihiin dadkii [qurbo-joog] lagu casuumay degaanka Somalida Ethiopia ayuu Jwxo-shiil, markii ugu horaysay mudo sanada iyo badh ah kula kulmay London.
Wax lala yaabo ma aha in in Jwxo-shiil, dad u iman waayo, wax lala yaabana ma aha in uu qabto kulan yar oo qarsoodi ah, maadaama uu joogo dal reer galbeed ah oo dulqaad u leh waxa uu ku jiro.
Waxaa wax lala yaabo ah in dad shalay iyaga oo qurba jooga oo ayna cidin qasbin ku qancay in dadkoodu nabad u baahan yahay ay si beel ah mar labaad Jwxo-shiil u taageeraan.
Boqolaal qurba joog ah oo nolol ku haysta dibada, ayey dawlada degaanku ku casuuntay gudaha si ay u tusto wax ka jira dalka iyo sida dadkoodu ugu baahan yahay. Dadkaasi waxay jidadka Jijiga iyo Dhagaxbuur baabuur cad cad ku hor mar marayeen hanti uu shacabku ka baahan yahay. Waxay Hoteela dalxiis ah sariiro ku dakaynayeen bilo, waxay cuntooyin la saxar tiray ku cunayeen makhaayadaha.
Dadkaasi waxay si niyad ah codkooda uga baahinayeen TV-yada aduunka oo dhan laga daawado, iyaga oo leh dadka iyo dalkuba waxtarkeena ayey u baahan yihiin xiligii colaada waa laga gudbay. Dhinaca kale waxay habaar u tabaantabinayeen wiilasha iyo wadaadka ay jooga ku filan tahay.
Waxaanu ka gaabsanay in aan soo bandhigno magacyadooda dadka noocaas u dhaqma ee aan diid karin Jwxo-shiil, kolka uu adeer yidhaahdo, ee waliba dib u siinaya Jwxo-shiil gunooyinkii degaanka laga siiyey.
Khayaanadu waa xaaraan nooca ay doonto ha ahaatee, fikirka uu ruuxu aaminsan yahay in uu ku akaystaa waa sharaf, in uu ka tanaasulo oo wax ka fiican qaatana waa garasho.
Qurba joogta badankoodu waxay mudan yihiin sharaf iyo cisi, waxayna dhibaatada la qaybsanayaan dadkooda, waxayna jecel yihiin in ay keenaan nolol degaanka Somalida inta yar ee sharafta darani ma badali karto ayaan qabaa horumarka iyo nolosha uu higsanayo degaanka Somalidu.